सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने पुनरावेदन गर्न जाने भनेको जनतामा नै होः प्रम; सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष : संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक, साझा रूपमा प्रतिकार गर्ने | NepaleKhabar.com
सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने पुनरावेदन गर्न जाने भनेको जनतामा नै होः प्रम; सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष : संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक, साझा रूपमा प्रतिकार गर्ने
December 21, 2020 | 9:02 pm
काठमाडौं, पुस ६ गते । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिकूलताका बीच पनि सरकारले युगान्तकारी काम गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिपक्षी दललाई उछिनेर पार्टीभित्रकै केही नेताहरु सरकारको विपक्षमा उभिएपछि सोचेजस्तो सरकारले काम गर्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
“सरकारले ऐतिहासिक कामहरु गरेको छ, नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन भएको छ, सर्वसम्मतिको रुपमा संविधान संशोधन भएको छ, मित्रराष्ट्र भारतसँग वार्ता भइरहेको छ । चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ, यस्तो बेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल गर्नु गम्भीर षडयन्त्र भएको स्पष्ट छैन र ?” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो ।
नाकाबन्दीको साहसको साथ सामना गर्दै नेपालको पारवहन सुविधा विस्तार गरी सुनिश्चित गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । त्यतिबेला पनि सरकारलाई यसैगरी अपदस्त गरिएको उहाँले बताउनुभयो । परिस्थिति र सन्दर्भ फरक भएपनि पात्रहरु त्यतिबेला पनि त्यही भएको उहाँले बताउनुभयो । थुप्रै प्रतिकुलताका बाबजुद नेपालले तीन वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । “कतिपय क्षेत्रमा फडको नै मारेका छौं” उहाँले भन्नुभयो ।
सुशासनको क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रो काम गरिरहेक बेला पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ! झन उल्टो बाटो रोज्नु देश र जनताको हितमा कसरी हुन्छ ? उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ तर सत्तापक्षकै केही साथीहरु प्रतिपक्षभन्दा आक्रमक विदम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो । यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकार अफ्नै पार्टीको घेराबन्दीमा परेकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमको साझा प्रतिकार गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी थिइन् । त्यसको प्रतिरोधका लागि कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।
बैठकले संसद् विघटन गर्ने सरकारको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा साझा प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकमा नेकपाका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहित कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सहभागी थिए । सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम र पार्टीका थप रणनीति बनाउन मंगलबार तीनवटै दलले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । ‘मंगलबार तीनवटै दलका केन्द्रीय समितिका बैठक बस्दै छन्, त्यसले थप रणनीति तयार गर्छ, र त्यसपछि पुनः तीन दलको बैठक बसेर थप कार्यक्रम तयार गर्छौँ,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने ।
बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, नेता वर्षमान पुन सहभागी थिए । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित पदाधिकारी र शीर्ष नेता सहभागी थिए भने जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र शरतसिंह भण्डारी सहभागी थिए ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहको भेला सकियो : संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बानेश्वरमा बसेको भेला सकिएको छ ।
भेलाले संविधानको प्रावधानअनुसार संसद् विघटन हुन नसक्ने भएकाले संसद् विघटन भएको अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै निर्धारित तालिकाअनुसार संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ । संसद्को एक अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्काे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधानलाई ध्यान दिएर छिटाे संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ ।
साथै नेकपाको संसदीय दलको बैठक पर्सि बुधबार बोलाउने पनि निर्णय गरिएको छ ।